Isbedellada aan la filayn ee Geeska Afrika ku yimi 10kii sano ee u dambeeyay | Berberanews.com
Home QORMOOYIN Isbedellada aan la filayn ee Geeska Afrika ku yimi 10kii sano ee...
Isbedellada aan la filayn ee Geeska Afrika ku yimi 10kii sano ee u dambeeyay
Waxa aan aad ula socdaa siyaasada Gobolka Geeska Africa guud ahaan ,waliba tobankii sanadood ee ugu dambeeyey , waxaa is badelay wax weyn oo marka aad eegto halkii la taagnaa 2010/11 iyo saadaashii xiligaasi siyaasada gobolku lahayd iyo halka maanta la joogo.
Gobolka Geeska Africa waxa ka jirey nidaam isku wada xidhan oo ay siyaasada Addis Ababa ugu Xoog weynayd uguna saameyn badnayd marka aad eegto dhinacwalba, Somalia xiligaasi waxa salka uun loo dhigayey nidaam dawladeed oo ku meelgaadh ah .
Dhinaca fur-furnaanta, dimuqaradiyada, doorashooyinka iyo koboc dawladnimo rajo mustaqbal oo wanaagsan yeelan karaysay Gobolka waxa ka baxayey shamac kaliya oo Somaliland buu ahaa, kaasi oo aduunku tusaale ka dhigtay guud ahaan Africa iyo gobolkaba loogu soo qaato xaga doorashooyinka yagleelka dawladnimo laga soo bilaabay dadka oo wada hubaysan ilaa qof iyo cod soo gaadhay.
Dawladaha Djibouti , Erateria , Sudan iyo Ethiopia iyaga nidaamyo gaamuray baa haystay oo xataa lagama rajo qabin 10 sanadood iyo in ka badan in wax iska badeli karaan amaba nidaamyadii xooganaa kuwii ugu waaweynaa meesha ka bixi karaan.
MAXAA DHACAY EE IS BADELAY 10 KA SANADOOD GUDAHOOGA GOBOLKA GEESKA AFRICA ?
Somaliland wax ba badani iskama badelin xaga nidaamka siyaasadeed ee dalka , doorashooyin badan oo la filayey na ma qabsoomin, laakiin sida kale dalku wuu socday oo horumar waa jiraa dhaliisha uu doono ha lahaado e wax badana waa is badeleen mid dawladeed iyo mid shacbiba , hadii laga tegi waayo hal qodob ayaa jira oo ku cusbaa 10 kaa sanadood;
1- Waxa weeyaan wadahadaladii jamhuuriyada Somaliland iyo jamhuuriyada federalka Somalia ee bilaabmay sanadkii 2012 kii oo ilaa hadda aan midho dhal aheyn.
Somalia waxa ay sameysay horumar balaadhan oo ilaa xad ah mid lagu bogaadiyo marka aad eegto dawlad ku meelgaadh ah ilaa dawlad caalamku aqoonsan yahay doorashooyin la isku haysto oo ay doodo sharci iyo qaar doorashooyin socdaan , walow xaga amniga guud aanu dawlada gacanta ugu jirin dhibtiina aanay wali ka joogsan iyo weeraradii argagixusadu.
Ethiopia waxa laba sanadood ka hor kacdoon shacab iyo dadka Ethiopia qoomiyada ugu badan oo gadooday keenay isbadel aan hore loo saadaalin oo gaadhay heer siyaasadii mandaqada iyo xaaladii gobolku is badesho, waxa is badelay wax weyn oo saameyntiisa muuqata leh , walow uu hada u muuqdo mid xaga dambe ka xagal daacaya, hadana waxa laga xusi karaa laba arin oo waaweyn;
1- Nidaamkii siyaasadeed ee EPRDF oo uu gadhwadeenka ka ahaayeen jabhadii TPLF ayaa meesha ka baxay si lama filaan ah .
2- Waxa heshiis dhex maray wadamada Erateria iyo Ethiopia oo uu dagaal lagu hoobtay ka jiray xuduudka labada dal halkaasi oo ahayd marka laga reebo xaalada Somalia halkii kale ee ugu darnayd Gobolka Geeska Africa oo werwerka ku haysay aduunka iyo Africa ba .
Sudan waxa ka dhacay laba is badel oo khariirad ahaan iyo siyaasad ahaanba wax uga badelay 10 ka sanadood ee la soo dhaafay, waxaana ay kala yihiin ;
1- waxa dalka Sudan kala noqday laba dal South Sudan iyo Sudan sanadkii 2012kii oo waxaa wax ka badelmeen khariirad ahaan dalkii sudan.
2- Waxa meesha ka baxay nidaamkii siyaasadeed ee kacaanka ahaa ee uu hogaaminayey Omer Albashiir kacdoon dadweyne dartii oo dhiig badani ku daatay kaasi oo aan aheyn mid la filayey.
Djibouti iyo Erateria waxba iskama badelin dalalkooda maamulkoodii walow guuxa dimuqaradiyad doonku jiro hadana hada waxba muuqdaan isbadelo ahi walow aan la saadaalin karin oo aduunku aanu sidii hore aheyn sidoo kale dadka Gobolka ku noolina ay ogaadeen awooda shacabka iyo sida ay wax u badeli karto.
HALKEE GOBOLKU HADA XAALADIHIISU MARAYAAN ?
Marka aad eegto xaaladaha guud ee Gobolka horta nabadgalyo waa jirtaa walow aanay aheyn mid cago adag ku taagan oo ay si dhibyar faraha uga bixi karto marka aad eegto duruufaha dalwalba gudihiisa ka taagan iyo damaca siyaasadeed ee la isku haysto.
Dagaaladii argagixisadu wali ma dhamaan oo waxba kuma aha hadii amaanku liico in uu Gobolku noqdo xarun iyo hoy argagixisada caalamiga ahi ka duusho oo dunida kalena khatar gaadhsiin kara.
Waxa jira xasilooni la’aan siyaasadeed , dagaalka nooca loo yaqaan xarbul wakaala ( proxy war ) oo guud ahaan Gobolka saameyn ku leh ay keentay hirdanada iyo loolanada dawladaha iyo siyaasiyiinta ee danaha ku fadhiya kaasi oo isaguna werwerkiisa leh
Gobolka Geeska Africa waxa ku soo fool leh doorashooyin sanadaha 2021/2022 oo ka jira Somaliland, Somalia, Djibouti, Ethiopia iyo Sudan kuwaasi oo iyaguna yeelan kara saameyno iyo saadaalo ka duwan waxa guud ahaan Gobolka ka jira hadda.
MAXAA IMAN KARA MUSTAQBALKA DHOW IYO KA FOGBA ?
Maadaama ay isbadeladii hore ee 10kaa sanadood gudahoogu noqdeen ama ahaayeen qaar aan la fileyn waxaa laga yaabaa in ay dhacaan isbadelo kale oo aan maanta laga sii dareen qabin hadii aan isku dayo saadaashayda;
1- Somalia waxa aan is leeyahay rajo wanaagsan bay leedahay waayo waxa ku raagtay dhibta, dagaalada , qaraxyada iyo wax badan oo dib u dhigey, intaasi marka lagu daro jiilka maanta kacay ee isweydiinaya ma sidan baan ku jireynaa? Halkee u socotaa Somalia? Sidii loo heli karaa dawladnimo dhab ah iwm waxa ay isweydiinta badani keentaa in xalka la helo oo halkaasi hore looga dhaqaaqo, waxaana suuragal noqon kara in ay dawlad adagi ka dhalato mustaqbalka.
2- Somaliland hadii Somalia adkaato laba mid ba way u yaalaan ama way iman karaan ; b)- in xal loo helo qadiyada jamhuuriyada Somaliland iyo jamhuuriyada federalka Somalia t)- In koboca iyo koriinka Somalia uu Somaliland ku keeno culeys oo mustaqbalka sida lagu kala baxayaa adkaato ama ay keento culeys iyo dagaalo.
3- Ethiopia waxa ay u soo muuqataa in aan lagu maamuli karayn nidaamkii dimuqaradiyadeed ee uu watay Dr Abiy Ahmed waxaana laga yaabaa in habkii ( Autocracy) ga ahaa ee EPRDF lagu celin doono, maadaama ay jiraan guux gobol walba iyo qoomiyad waliba qabto oo abuuri kara in dagaalo sokeeye oo badani dhacaan taasi oo halis ku ah Ethiopia iyo guud ahaan Gobolka Geeska Africa.
4- Sudan waxa laga yaabaa hadii qolada kumeelgaadhka ahi ay kursiga sii jeclaystaan oo ay doorashooyin dhici waayaan in ay soo noqdaan kacdoonadii shacabku oo uu dalkaasi dib u galo xaalado murug siyaasadeed ah.
5- Djibouti waxa markii 5naad soo istaagay Madaxwayne Geelle oo hadii uu ku guuleysto ka mid noqonaya madaxda Africa ugu cimriga dheer xaga talada isaga oo hada jooga 21 sanadood, walow aanu muuqan mucaarid adagi hadana lama saadaalin karo mustaqbalka dalkaasi waxaana suuragal ah in wax badani is badali karaan si lama filaan ah.
6- Erateria iyada lafteeda waa sida Djibouti oo in badan ayey dadka reer Erateria dunida u yaacayeen markay cabudhaan in iyaga oo wada cabaysan ay soo noqdaan oo dhaq-dhaqaaqyo siyaasadeed dalkaasi ka bilaabmaan waa wax iman kara 80%.
Hogaamiye Mohamed Dhimbiil
Previous articleSHAN IYO LABAATANKA XUBNOOD EE GOLAHA DEEGAANKA HARGEYSI MA GANACSATAA?!
Next articleDawladda Itoobiya oo sheegtay inay dishay saraakiil Tigree ah
EEDAHA Xarunta Dhaqanka Hargeysa CADDEYMO La’aan waa: Namiimiyahu warkuu keenay buu NACAS run moodaa…
𝗫𝗮𝗿𝘂𝗻𝘁𝗮 𝗗𝗵𝗮𝗾𝗮𝗻𝗸𝗮 𝗲𝗲 𝗛𝗮𝗿𝗴𝗮𝘆𝘀𝗮 𝘄𝗮𝘅𝗮 𝗶𝘀𝘂 𝗯𝗮𝗵𝗮𝘆𝘀𝘁𝗮𝘆 𝘀𝗮𝗱𝗲𝘅 𝗸𝗼𝗼𝘅𝗼𝗼𝗱.